Soosaarayaasha Soo Saarayaasha & Soo-saareyaasha - Warshadaha Shiinaha ee loo yaqaan 'Tire Tire Wars'
Taayirrada baaskiilka korantada - EBT101
Naqshadeynta naqshadeynta naqshadeynta sheeko cusub ayaa leh iska caabin hoose iyo dheecaan wanaagsan. Naqshadeynta dusha sare ee naqshadeynta biyaha waxay sare u qaadeysaa bilicsanaanta taayirka waxayna sidoo kale wanaajineysaa dhismaha anti-slider.
Naqshaddii ugu dambeysay ee taayirrada korantada - EBT102
Qaabka salka dhexe, qaabeynta qulqulka labada dhinac, oo leh xasiloonida maareyn wanaagsan iyo bullaacad Dusha sare ee dusha sare ee ubax dusha sare iyo naqshadda miro dhadhamiska ah waxay kor u qaaddaa muuqaalka waxayna sare u qaadeysaa ilaalinta.
Taayirada elektaroonigga ah oo dhan - EBT103
Naqshad cusub oo isku-dhafan oo leh caagag hoose oo hooseeya iyo dheecaan wanaagsan. Qaabka dillaaca xayawaanka iyo gemstones dusha sare ee naqshaddu waxay wanaajisaa bilicsanaanta taayirrada sidoo kale waxay hagaajisaa is-xakamaynta.